November 7, 2019 - ThutaSone
နောက်ဆုံးအခွင့်ရေး…သားနဲ့တို့ ဝေးခဲ့ကြပြီ အဖေနဲ့အမေ
November 7, 2019 ThutaSone 0
နောက်ဆုံးအခွင့်ရေး…သားနဲ့တို့ ဝေးခဲ့ကြပြီ အဖေနဲ့အမေ မ မျှော် လင့် ခဲ့ ကြ ပါ ဘူး အခုလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို ဘယ်သူတွေက မျှော်လင့်ခဲ့ကြမှာလဲလေ တကယ်ဆို သားရဟန်းရဲ့ အသက်ကအခုမှ ၃၀ တောင် မပြည့်သေးလေ အဖေနဲ့ အမေတို့ရဲ့အသက်က ၅၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ၅၀ကျော်တွေ […]
ည(၇:၀၀)နာရီ အချိန် သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်…(၁၄)ပေခန့်ထိ လှိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၈:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Cyclonic Storm) “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး…. အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါရာဒစ်ပ်မြို့ (Paradip) (ဩရိဿ-Odisha)၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် […]
၆ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ကို အပြီးဝင်သွားတဲ့ သားကို လွမ်းနေတဲ့ မိခင်
ပြီးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းတွေ ထွက်တုန်းက ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဟာ ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာ စာကြိုးစားသလို ၊ ဉာဏ်ရည်လည်းထက်မြက်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မိခင်ကိုယ်တိုင် မျှော်မှန်းထားသလို ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဒီလိုပဲ ထင်မှတ်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို အံ့သြသင့်စေတာတစ်ခု ကို သူတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ သားဖြစ်သူ ဂုဏ်ထူးအပြည့်နဲ့ […]
ထူးခြားဖြစ်စဉ် ပုဂံ ဓမ္မရာဇကဘုရားတွင် ဓမ္မပါလစစ်သူကြီး ဝင်ပူးကပ်သည့် (ရုပ်သံ)
ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ ဓမ္မရာဇကဘုရားမှာ အစောင့်အရှောက်အဖြစ် ရှိနေတဲ့ ဓမ္မပါလ စစ်သူကြီးက ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့ အမျိုးသမီး တဦးကို ဝင်ရောက် ပူးကပ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို ရုပ်သံဖိုင်နဲ့ တကွ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဝင်ရောက်ပူးကပ်စဉ် အတွင်းမှာ သစ္စာဆိုခဲ့ပြီး အလွန်တရာ ခါးသက်တဲ့ တမာရွက်တွေကို အခါးအရသာ ပျောက်သွားအောင် ပြုလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ […]
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့တွင် မဖြစ်မနေလှူပါ
လိုရာပြည့်စေမည့် အလှူ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့တွင် မဖြစ်မနေလှူပါ တနင်္ဂနွေသားသမီး ရွက်လှ ၄ညွန့် သောက်တော်ရေ ၃ခွက် တနင်္လာသားသမီး ပိတောက်ညွန့် ၅ညွန့် နွားနို့ ၁ခွက် အင်္ဂါသားသမီး သြဇာ ၆ညွန့် ကော်ဖီ ၁ခွက် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုသားသမီး ဂန္ဓမာပန်း ၇ပွင့် ကျောက်ကျော ၃တုံး […]
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အကြောင်း..
ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထား သူ​တွေပါ။ ဒါ​ကြောင့် သူတို့ဟာ အခြားလူ​တွေနဲ့ […]
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း ၁၂ ပေထိ လှိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေ ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းအရေးကြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဖတ်မိမှာပါ…ယခု မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်မှာတော့ မုန်တိုင်းသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်…. နောက်ထပ် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်းအရ ယနေ့ကစလို့ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ […]
အသည်းကင်ဆာရောဂါကြောင့် သား ၃ ယောက်ကို ၄ နှစ်အတွင်း ဆုံးရှူံးခဲ့ရတဲ့ မိခင်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက Lorelei လို့အမည်ရတဲ့ Single mom တစ်ဦးဟာ သား၃ဦးကို ၄နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သနားဖွယ်မိခင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့သားအကြီးနဲ့ သားအလတ်တို့ဟာ အသည်းကင်ဆာကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ၆လသာခြားပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သား၂ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မိခင်အတွက် ပိုမိုရင်ကွဲရတဲ့အဖြစ်ကတော့ တစ်ယောက်တည်းကျန်တော့တဲ့ သားအငယ်ဟာလည်း အသည်းကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဘင်္ဂလားပင်အော်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတိပြုရန် မိုးဇလထုတ်ပြန်
ဘင်္ဂလားပင်အော်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမှာ လမ်းကြောင်းပြောင်းရွေ့လျားလာသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သတိပြုရန်လိုအပ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးက ပြောကြားသည်။ “မုန်တိုင်းက အရှေ့မြောက်ဘက်ကို နည်းနည်းကွေ့လာတဲ့ သဘောရှိတယ်။ အချို့မော်ဒယ်စတင်တာတွေက အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဝင်နိုင်တယ်လို့တွေ့ရတယ်။ လမ်းကြောင်းက ပြောင်းတော့ ပြောင်းနိုင်သေးတယ်။ ပထမတုန်းကအိန္ဒိယ။ အခုအိန္ဒိယနဲ့ […]
ဆရာဝန်နဲ့ပြတာတောင် မပျောက်တဲ့ ချောင်းဆိုးရင်ကြပ်ရောဂါ (၅)ရက်နဲ့ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်း.
အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြတာတောင် မပျောက်တဲ့ ချောင်းဆိုးရင်ကြပ်ရောဂါ (၅)ရက်နဲ့ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်း ငွေမကုန်ပဲ ရောဂါသက်သာစေတဲ့ ဆေးနည်းမို့ ကျမနဲ့ ရောဂါတူသူများရှိရင် စမ်းသောက်ြ က ည့်ေ စ ချင်ပါတယ်နော်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် ဖြစ်နေတာ ရက်၂ဝ ကျော်နေပီ။ ဖြစ်ခါစက တစ်ပါတ်လောက်အထိ နေ့တိုင်း ဆေးခန်းသွားပြတယ်။ မသက်သာဘူး […]